चतुराई मंगल: विशेषताहरु, रचना र महत्व | नेटवर्क मौसम विज्ञान
चतुराई मंगल यो एक बुद्धिमान हेलिकप्टर हो जसको मुख्य लक्ष्य मंगल ग्रह माथि उडान गर्नु हो। यो केवल १.1.8 किलोग्राम तौलको मात्र हुन्छ, यसले धेरै प्रकाश र ढुवानी गर्न सजिलो बनाउँदछ। यद्यपि यसमा विशाल अवस्थाले ब्रह्माण्डको खोजीमा ठूलो प्रगति गरिरहेको छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई मंगल ग्रहको सबै सुविधाहरू, अपरेशन र महत्वको बारेमा बताउन गइरहेका छौं।
2 चतुर्थ मार्स कठिनाइहरू
3 सरलता मंगल ग्रहको क्षमता
4 चाखलाग्दो डाटा
हेरौं एक हेलिकप्टरको मुख्य विशेषताहरु के के हुन् जुन अर्को ग्रहमा यात्रा गर्न चाहान्छन्। सरल मार्टेले अत्याधुनिक प्रविधि प्रस्तुत गर्दछ जुन यसलाई अन्तरिक्ष अन्वेषणको लागि क्रान्ति बनाउँछ। यो एक प्रोजेक्टमा आधारित थियो जुन सीमित स्कोपको साथ नयाँ क्षमता अनुमोदन गर्न खोज्छ। सुविधाहरू specially विशेष गरी बनाइएको कार्बन फाइबर ब्लेडहरू दुई रोटरमा व्यवस्थित छन् जुन दिशामा घुम्छन् २,2.400०० आरपीएमको वेगको बिपरित। यो गति हाम्रो ग्रहमा यात्री हेलिकप्टर भन्दा धेरै पटक छिटो छ।
यसले अभिनव सौर कोषहरू, उच्च-गुणवत्ताको ब्याट्रीहरू, र अन्य अधिक परिष्कृत कम्पोनेन्टहरू पनि प्रदान गर्दछ। उनले कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक उपकरण बोक्दैनन् यो मंगलबार २०२० को पर्सिएभरेसनबाट एक छुट्टै प्रयोग हो। यो अर्को ग्रहमा नियन्त्रित उडान प्रयास गर्ने पहिलो विमान हो। र यो यो हो कि सरलता मंगल ग्रहको हेलिकप्टरले अर्को ग्रह उडाउन इतिहासमा पहिलो प्रयास गर्नेछ।
चतुर्थ मार्स कठिनाइहरू
के एक हेलिकप्टर को लागि मंगल ग्रह उडान गर्न अधिक गाह्रो बनाउँछ के यसको पातलो वातावरण हो। यसले पर्याप्त लिफ्ट प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउँछ। र यो यो छ कि मंगल ग्रहको वातावरण पृथ्वीको वातावरण भन्दा% 99% कम घने छ। यसको मतलब यो प्रकाश हुनुपर्दछ, एक रोटरको साथ जुन धेरै ठूलो छ र पृथ्वीमा यस मोडेलको हेलिकप्टरको लागि चाहिने भन्दा छिटो घुमाउन सक्छ।
मैले यस ग्रहको तापक्रमलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ। यो केहि क्षेत्रहरु मा तापक्रम को लागी धेरै सामान्य छ त्यो अवतरण ड्रपको कम्तिमा १ degrees० डिग्री फरेनहाइट जुन 130 ० डिग्री सेल्सियस छ। यद्यपि सरल मार्स टोलीले यस्तै तापक्रम अनुमोदन गरेको छ, यो विश्वास गरिएको छ कि यसले राम्रोसँग प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। चिसो यस हेलिकप्टर को धेरै भाग को डिजाइन सीमा धक्का हुनेछ।
साथै, JPL उडान नियन्त्रणकर्ताले जॉयस्टिकको साथ हेलिकप्टरलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछैन। सञ्चार ढिलाइ अन्तरदेशीय दूरीहरूमा अन्तरिक्षयानको अपरेशनको एक अन्तर्निहित अंश हो। अर्डर अग्रिम पेश गर्नु पर्छ र ईन्जिनियरिंग डेटा प्रत्येक उडान पछि लामो अन्तरिक्षयानबाट फिर्ता आउँनेछ। एकै साथ, सरलतामा वेपोइन्टमा कसरी उडान गर्ने र न्यानो रहनको लागि निर्णय गर्न धेरै स्वायत्तता हुनेछ।
सरलता मार्स इन्जिनियरि। को पहिले नै प्रदर्शन गरिएको छ। ईन्जिनियरहरूले देखाए कि यो एकदम पातलो वातावरणमा पर्याप्त लिफ्ट उत्पादन गर्न सक्षम उडान र त्यस्तै वातावरणमा बाँच्न सक्षम प्रकाशको निर्माण गर्न सम्भव छ। तिनीहरूले जेपीएलमा निर्दिष्ट स्थान सिमुलेटरहरूमा केही अधिक उन्नत मोडेलहरूको परीक्षण गर्नेछन्। सम्पूर्ण टीम सफलतापूर्वक चरण गणना गरी गणना गर्दछ गणना गर्न सकिन्छ आविष्कार गर्न जाँदैछन् कि संग।
सरलता मंगल ग्रहको क्षमता
वैज्ञानिकहरूले यस उपकरणको प्रत्येक सफलताको उत्सव मनाउन सक्षम हुनेछन्। र यो केवल केप क्यानभेरलबाट सुरूवातमा बाँचेको र सम्पूर्ण ग्रह क्रूसमा मंगल ग्रह अवतरण गर्ने खर्चमा रहेको छ, यो पहिले नै सफल हो। एक पटक तपाईं रातो ग्रहमा जानुभयो भने तपाईंले आफूलाई असाध्यै चिसो मंगलवार राति न्यानो राख्नु पर्छ। यसको फाइदा एक स्वायत्त रूपमा सौर प्यानल को अस्तित्व को लागी धन्यवाद चार्ज गर्न सकिन्छ। यदि हेलिकप्टर पहिलो उडानबाट सफल भयो भने, अर्को परीक्षण उडानहरू भित्र प्रयास गरिनेछ लगभग Mar० मंगल ग्रह दिनहरूको विन्डो, जुन about१ पृथ्वी दिनहरूको बराबर हुन्छ.
यदि यो मिसन सफल भयो भने, रातो ग्रहको भविष्यको अन्वेषणमा महत्वाकांक्षी हवाई आयाम समावेश हुन सक्छ। यो वायुमण्डलमा उडान गर्न आवश्यक प्रविधि निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर प्रदर्शन गर्ने उद्देश्य हो। यदि सफल भयो भने, यसले अन्य उन्नत रोबोटिक उडान सवारीहरूको निर्माणलाई अनुमति दिन सक्छ जुन मार्समा भविष्यका रोबोटिक र प्रबन्धित मिसनहरूमा सामेल हुन सक्छ। तिनीहरू पनि एक अद्वितीय सुविधाजनक बिन्दु प्रदान गर्न सक्दछन् आजको उच्च उचाई परिक्रमा द्वारा प्रदान गरिएको छैन।
यस प्रकारको टेक्नोलोजीको विकासको लागि धन्यबाद, हामी हाई डेफिनिशन छविहरू प्रदान गर्न सक्षम हुनेछौं र मानवी चोरीहरूका लागि मान्यता प्रदान गर्ने, भू-भागमा पहुँच प्रदान गर्नका लागि जुन रोभरहरूको लागि पुग्न कठिन छ। सबै टिम हाम्रो ग्रहको मंगल ग्रहमा सरलता जाँच गर्न उसले भरसक कोसिस गर्यो। यी सबैको महत्त्व यो सबै समय सिक्नु हो जुन यो उत्तम इनाम बन्न सक्दछ र भविष्यमा अन्य विश्वहरूको अन्वेषण गर्ने मार्गको लागि अर्को आयाम होस्ट गर्न सक्षम हुन।
सरल मार्स तथाकथित जेजेरो क्रेटरमा अवतरण हुनेछ, एक 45-किलोमिटर चौडा प्वाल इसिडिस प्लानिटियाको पश्चिमी किनारमा रातो ग्रहको सतहमा अवस्थित छ, मंगलवार भूमध्यरेखाको उत्तरमा एउटा विशाल असर बेसिन। टाढा विगतमा, यो क्रेटर ओएसिस हुन सक्छ।3देखि billion अरब वर्षअघिसम्म, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ताहो ताल तालको आकारमा पानी बगिरहेको थियो र कार्बोनेट र माटोको खनिजहरूले भरिएको तलछटहरू जम्मा गरेको थियो। पर्सिएरन्स साइन्स टोली विश्वास गर्दछ कि यो पुरानो नदी डेल्टाले जैविक अणुहरू र माइक्रोबियल जीवनको अन्य सम्भावित संकेतहरू स collected्कलन गरेको हुन सक्छ।
पाँच बर्ष भन्दा बढीको लागि, साना, वृद्धिशील चरणहरूको माध्यमबाट, जेपीएल ईन्जिनियरहरूले देखाए कि यो हल्का वजनको उपकरण बनाउन सक्दछ जुन मंगलको पातलो वातावरणमा पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न गर्न सक्दछ। यो पृथ्वीको कठोर वातावरणमा पनि बाँच्न सक्छ। अन्तिम प्रोटोटाइपलाई JPL स्पेस सिम्युलेटरमा सयौं बढ्ता उन्नत मोडेलहरूको परीक्षणको आवश्यक पर्दछ। यदि यी चरणहरू मध्ये कुनै असफल भयो भने, परियोजना असफल हुनेछ.
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईं ब्रह्माण्डको ज्ञानको लागि बौद्धिक मंगल, यसको विशेषता र महत्त्वको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » चतुराई मंगल